LG က၎င်းသည် Google Pixel3ကို 2018 ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုငြင်းဆိုခဲ့သည် Androidsis
တောင်ကိုရီးယားမှကုမ္ပဏီမှနောက်ဆုံးထွက်ကောလာဟလများအရသိရသည် LG သည် HTC ကို Google ၏ Pixel3စမတ်ဖုန်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်အစားထိုးနိုင်သည်၎င်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ LG ကဒီအချက်အလက်တွေကိုတရားဝင်ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ် ထင်မြင်ချက်မျှသာဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဂူးဂဲလ်သည် Nexus တံဆိပ်ကိုတရားဝင်အဆုံးသတ်ပြီး Pixel နှင့် Pixel XL အသစ်ကိုစတင်ခြင်းဖြင့် ၄ င်းတို့၏နည်းဗျူဟာကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သူတို့မှာအငြင်းပွားဖွယ်ရာဒီဇိုင်းရှိသော်လည်းအလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ယခုဤ terminal ၏ဒုတိယမျိုးဆက်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများစတင်ပျံ့နှံ့နေပြီဖြစ်သောတောင်ကိုရီးယားမီဒီယာ Chosun Biz သူကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည် Que Google သည်3Pixel 2018 စမတ်ဖုန်းများအတွက် LG ကို၎င်း၏မိတ်ဖက်အဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည်.
Chosun Biz မှဖော်ပြချက်အရ Google သည်တတိယမျိုးဆက် Pixel ထုတ်လုပ်ရာတွင်ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုရှိစေမည့်မိတ်ဖက်အသစ်ကိုရှာဖွေနေသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ Google နှင့် LG တို့သည်ယခင်ကလက်တွဲခဲ့ကြသည် Nexus 4, Nexus5နှင့် Nexus 5X ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည် Google သည် LG ၏ OLED ဌာနခွဲတွင်ဒေါ်လာ ၈၈၀ မီလျံခန့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ တည်ငြိမ်သော OLED မျက်နှာပြင်များသေချာစေရန်။ Samsung မှထုတ်လုပ်သော Galaxy Pixel ဖုန်းများအတွက် Galaxy စမတ်ဖုန်းနှင့် Apple အိုင်ဖုန်းများအတွက်သီးသန့်ထားရှိသည်။
အဆိုပါကောလာဟလသည်အလွန်ပြင်းထန်ပြီးအချို့စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများက၎င်းကိုယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားသည် LG သည်နောက် Pixel2နှင့် Pixel XL2တို့ကိုပင်ကူညီနိုင်သည်.
သိသာထင်ရှားတဲ့ Pixel တံဆိပ်ရဲ့လူကြိုက်များမှုကြောင့် LG သည်၎င်း၏ဝင်ငွေတိုးလာသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် ဂူဂဲလ်နှင့်ဤမိတ်ဖက်ပြုမှုကိုရွေးချယ်ပါကယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ HTC ကဲ့သို့ပင်။
သို့သော် LG မှ၎င်းအချက်အလက်များကိုတရားဝင်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Chosun Biz မှထုတ်ပြန်သောသတင်းအချက်အလက်သည်ကုမ္ပဏီ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာ Ken Hong ကပြောကြားခဲ့သည် "အမြင့်ဆုံးဒီဂရီ၏ထင်ကြေး" LG သည် "ကြားနာခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍" မဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » LG က၎င်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Google Pixel3ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုငြင်းဆိုခဲ့သည်
Blackview P2, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အမြင်